အမေရိကန်နိုင်ငံက လက်ဝယ်ထားသော နျူကလီးယားလက်နက်အရေအတွက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား - Xinhua News Agency
၁၇ကြိမ်မြောက် တရုတ်ပြဇာတ်ပွဲတော် ဝူဟန်မြို့၌ ကျင်းပပြီးစီး
တရုတ်နိုင်ငံက Kuaizhou-1A ဒုံးပျံဖြင့် ဂြိုဟ်တုတစ်စင်းအား လွှတ်တင်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၌ ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များတွေ့ရှိရ
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာလီဘန် ယာယီအစိုးရအဖွဲ့ ယာယီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Amir Khan Muttaqi တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၉ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
ဝါရှင်တန် ၊ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံ၌လက်ဝယ်သိမ်းဆည်းထားသည့် နျူကလီးယားလက်နက်အရေအတွက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလအထိ နျူကလီးယားလက်နက်ထိပ်ဖူးပေါင်း ၃,၇၅၀ ခုကို လက်ဝယ်ထားသိမ်းဆည်းထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါသိုလှောင်ထားရှိမှုတွင် အသက်သွင်းထားသော(active) နှင့် အသက်မသွင်းထားသော (inactive) လက်နက်ထိပ်ဖူးနှစ်မျိုးစလုံး ပါဝင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး အရန်လက်နက်ထိပ်ဖူး ၂,၀၀၀ ခန့်ကို လက်ရှိတွင် အသုံးမပြုတော့ဘဲ စနစ်တကျဖျက်ဆီးရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
နျူကလီးယားလက်ဝယ် သိုလှောင်ထားရှိမှုအရေအတွက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းအား လျှို့ဝှက်ထားရန် ယခင်အစိုးရက ချမှတ်ခဲ့သည့် မူဝါဒအား ဆန့်ကျင်ကာ လေးနှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက် အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကမ္ဘာ့နျူကလီးယားလက်နက်ထိပ်ဖူးအားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့က ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် အကြံပေးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များအဖွဲ့၏ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
U.S. discloses size of nuclear stockpile
WASHINGTON, Oct.6(Xinhua) — The U.S. State Department has disclosed the number of nuclear weapons in the country’s stockpile.
A report issued on Tuesday showed that the U.S. stockpile consisted of 3,750 nuclear warheads as of September 2020.
The stockpile includes both “active” and “inactive” warheads, the report noted, adding that some 2,000 additional warheads are currently retired and awaiting dismantlement.
The disclosure, the first time in four years, reversedapolicy introduced by the previous administration to classify the size of the nuclear stockpile.
The United States and Russia possess most of the world’s nuclear weapons.
According to the latest data by the Federation of American Scientists,aWashington, D.C.-based think tank, over 90 percent of global nuclear warheads are owned by the two countries. Enditem
Photo – National Guard soldiers are seen on Capitol Hill in Washington, D.C., the United States, on Jan. 14, 2021. (Photo by Ting Shen/Xinhua)
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော သေနတ်ပြပွဲက ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိ